IRiver Side Cabin, ekwibala lenkampu yabucala olona hambo lokukhempisha lokugqibela. Yindlu entle kodwa elula emdeni woMlambo iSol Duc. Iyaziwa ngokuloba kwayo okukumgangatho wehlabathi, kunye namanzi ahlwahlwazayo. Ikhabhinethi yethu ikuvumela ukuba ube namava angaphandle ngelixa ungaphakathi. Ukubonelela ngezibane ezintle zendalo. Ngexesha lokuhlala kwakho uya kufumana isandi esipholileyo somlambo, imililo yenkampu ekufuneka uyikhumbule kunye nendawo ongasokuze uyilibale. Bhukha uhambo lwakho lokulala phantsi kwe-evergreens kunye neenkwenkwezi!
Yiba namava amnandi ngaphandle kubuntofontofo bale ndlwana ilula kodwa intle. Ikhabhinethi inezitshizi ezimbini zokupheka phezulu ezinepropane ezibonelelweyo, iseti yenkampu yeepani zeembiza kunye nezitya, iibhafu zokuhlamba izitya, izixhobo zokupheka. Ukuba kukho into oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho umamkeli uyonwabile ukunceda! Umamkeli-ndwendwe unazo izinja zosapho ezithi ngamanye amaxesha zithande ukutyelela zinobubele. Ilebhu yetshokolethi ka-Abby, uMqhude oyiHusky kunye nomfo omncinane oyinjana etyheli.
Singabantu abaphantsi emhlabeni, sibekekile, kwaye samkelekile. Yentsapho kwaye iqhutywa. Ifakwe kufutshane nezinto ezininzi eziluncedo kunye nezinto ezinomtsalane. Okufana ne-mora beach, 3rd beach, 2nd beach 10 minutes to lapush kunye nemizuzu eli-10 ukuya kwiifolokhwe.
Umamkeli uMechelle uhlala kwisiza kwaye unokunceda ngayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo ngexesha lokuhlala kwakho xa ekhona.